नेपाली Archives - Khoyaa
Home / Tag Archives: नेपाली
बारी सबै खनिदे
जेल म परेको आफ्नो एक्लो छोरा धुर्मुस लाई गाउ बाट दारी बुडो ले चिट्ठी लेखेछ बाबु छोरा यहाँ गाउको बारी म! मक्कै छरने बेला नि भयो ,काम गर्ने कोइ छैनन घर मा ,एस्तो सरो बारी म बुडो ले कसरी खनम, त यहाँ भको भये खनि दिन्थिस, के गर्ने होला अब …
दिमाग तेज हुन्छ
सेरे अंगुर बेच्दैथ्यो। त्यही बिर्खे आईपुगेछ। बिर्खे- यो खांदा के हुन्छ? सेरे- दिमाग तेज हुन्छ? बिर्खे – भएन भने नी? सेरे- एक किलो चामल मा कति दाना हुन्छ? बिर्खे- थाहा छैन। सेरेले एउटा अंगुर बिर्खेलाई खुवायो अनि खाईसके पछि सेरे- एक दर्जन केरा मा कति ओटा केरा हुन्छ? बिर्खे- 12ओटा। …
कपाल काट्न सैलुन
कपाल काट्न सैलुन पुगेको ग्राहक हजाम सँग ” ए दाई तिमी किन सधैं मेरो कपाल कट्नु अधि डरलाग्दो डरलाग्दो कथा सुनौछौ ?? हजाम : डरलाग्दो कथा सुनाउदा तपाईंको कपाल ठाडो ठाडो हुन्छ अनी मलाई काट्न सजिलो हुन्छ नि त
दुई जडियाको गफ
दुई जडिया गफ गर्दै आएछन । पहिलो जडिया : हामी पनि आप जस्तै झुन्डिएर बसौ न साथी । दोस्रो जडिया : हुन्छ । (दुबै जना नजिकैको रुखमा झुन्डिछन । एक छिन पछी दुवै जना खसेछन्) पहिलो जडिया : किन झरेको साथी । दोस्रो जडिया : थाकेर झरेको यार । अनि …
२ जना साथी हरु गफ गर्दै थिए । पहिलो साथी (केटीलाई देखाउदै)- हेर त क्या sexy माल जादै छ दोश्रो साथी- अ साँच्चि माल भन्दा याद आयो ,भाउजुको हालखबर के छ नि!